Dhibaatooyinka Texas Holdem - UK 2021 ✅
Ma Jirto Lacag Dhigasho
Sida loo ciyaaro Baccarat
Nidaamka Sharad Baccarat
Sida loo ciyaaro Blackjack
Tirinta Kaararka Blackjack
Tabaha Xeeladaha Martingale
Sida loo ciyaaro Texas Holdem
Texas Holdem Kuwa Bilowga ah
Istaraatijiyadda Texas Holdem
Dhibaatooyinka Texas Holdem
Saddex Kaarka turubka
Kasiinooyinka lacag bixinta degdegga ah
Home » Ciyaaraha Casino » Texas Hold’em » Dhibaatooyinka Texas Holdem
20 Dhibaatooyinka Texas Holdem
Marka ma waxaad dooneysaa inaad ku guuleysato ciyaarta turubka? Hadday haa tahay, markaa waa inaad ka ogaataa waxa ku saabsan fursadaha. Hoos waxaa ku qoran qaar ka mid ah qamaar khamaarka iyo macluumaadka kaa caawin kara kordhinta fursadahaaga miiska turubka waqtiga soo socda ee aad ciyaareyso.
Bilaabidda gacmaha qiimaha leh
Ma ogeyd inaad haysato 2.1% fursad aad ku soo aruuriso gacan bilow ah, oo leh lammaane sawir, laba aces ama AK ku habboon? Haddii aad ku guuleysatay inaad hesho kuwan, xaji oo si adag u ciyaar.
Haddii aad ka yartahay hal kaar oo keliya buuxinta (kuuskuus), waxay ku siinaysaa boqolkiiba 34.97% inaad gacantaada sameyso.
Ka taxaddar kaararka ku habboon
Marka waxaad haysataa laba kaar oo ku habboon. Si toos ah ha u ciyaarin lammaanaha maxaa yeelay waxay kaliya kor u qaadi doontaa gacantaada 2.5%.
Waxaad leedahay 32.43% fursad ah inaad kuhesho lammaane kaararkaaga daloolka ah ee foorarka.
Saddex nooc ah
Haddii aad soo ururisay labo, fursadda aad ku garaaci karto nooc saddex nooc ah waa 7.5 / 1. Marka waa inaad ku ciyaartaa lammaanahaaga yar sida saxda ah, iyo haddii qiimuhu sax yahay.
Tani maahan sabab lagu taliyay in wax lagu sawiro, iyadoo webiga iyo leexasha la filayo inay dhowaan yimaadaan.
Haddii labo lammaane ay u socdaan guusha, lammaanaha waaweyn ayaa leh 80% fursad ay ku sameyn karaan. Haddii gacantaadu muujiso boqorado oo aad ogaato in sharad la kiciyey oo dib loo kiciyey, waxaa jira fursad weyn oo ciyaaryahanka kale uu leeyahay boqorro, aces ama labadaba. Tani waa hal tilmaan oo muujineysa inay tahay waqtigii laabashada.
Ururinta kaararka saxda ah
Waxaad haysataa fursad aad u yar oo ah soo qaadashada kaararka saxda ah. Haddii gacantaadu u baahan tahay laba kaar oo sax ah markasta iyo webiga, waxa kaliya lagu siinayaa fursad ah 0.03%. Haddii aad mid leedahay, fursadda uruurinta tan kale waa 4.55% oo keliya.
Waad kordhin kartaa fursaddaada inaad ku soo ururiso lammaane koraya kala badh webiga agtiisa.
Haddii aad maamusho inaad ku rogto barbaro furan oo toos ah ciyaarta turubka, waxay ku siin doontaa siddeed kaar oo suurtogal ah oo gacanta ku wareegi kara. Taas macnaheedu waa inaad gacantaada ku garaaci doontid webiga 31.5% wakhti kasta. Waxaan kuu soo jeedinaynaa inaad helayso gacmo dheri si aad u daawato kaarka xiga.
Iska hor imaad u dhexeeya labo iyo laba kaar ayaa loo yaqaanaa tartanka ama lacagta-rogmada maxaa yeelay isku-darka kasta wuxuu leeyahay 50% fursad uu ku guuleysto mar kasta. Hadda, haddii kaararka ciyaaryahanka uu ku habboon yahay, labada lamaane waxay yeelan doonaan fursad ah 46% ilaa 54%, laakiin haddii kale, fursadda guuleysiga ayaa kor u kici doonta darajada 48% ilaa 57% inta badan.
Haddii kaarka kore ee gacantaadu uu u dhigmo kan kale ee ciyaaryahanka, laakiin waxaad leedahay laad yar, markaa waxaa keliya oo lagu siiyaa fursad ah 24% inaad ku guuleysato. Tusaale ahaan, haddii aad leedahay boqorad ka hor timaadda boqor ama asce, markaa fursaddaadu waa qiyaastii 1 4.
Xidhiidhiyayaasha ku habboon
Ciyaartoyda badankood waxay doorbidi doonaan iskuxirayaasha ku habboon ee udub dhexaad u ah inay sifiican u barbar dhigaan aces maxaa yeelay kuwani waxay ku siin karaan fursado badan oo aad si toos ah ugu ururiso isla markaana ku soo daadiso Laakiin haddii aad xajinayso, ha ka welwelin. Maskaxda ku hay in labada lamaane ay ka jecel yihiin isku xirayaasha ku habboon qiyaastii 80% waqtiga.
Waxaa lagaa qaban doonaa lammaanaha jeebka hal mar 17kii gacmaba.
Waa inaad had iyo jeer laab laabataa gacmaha hoose. Xitaa haddii gacantaadu ku habboon tahay, fursaddaada inaad ku siibto biyo-qabatinka ayaa lagu dhejiyay 0.8%.
Waxaad haysataa fursad aad u yar oo aad kaga soo boodaan karto laba-labo kaararka godadka aan is-raacsaneyn. Tani waa inay ku siiso kaliya 2% fursad.
Haddii aad ku guuleysatay inaad ku soo ururiso laba lammaane flop-ka, waxaa lagu siiyay fursad ah 16.74% si aad u sameysato guri buuxa.
Guri kale oo buuxa
Laakiin haddii aad ku guuleysatay inaad ka leexiso saddexda nooc, waxaad hadda haysataa fursad ah 33.4% inaad ku hesho guriga buuxa ama aad uga sii fiicnaato webiga.
Kaararka tooska ah
Marka waxaad qatarta u gashay kaararka nasiibka si aad uqaadato indhoolayaasha waxaana ku wacay AK. Hase yeeshe, kaararka aan kala sooca lahayn ayaa la siiyaa 35% fursad ah inuu ku guuleysto dhacdooyinkan.
On jeebka jeebka
Ka taxaddar jeebka jeebka markaad ciyaareyso Texas Hold’em Poker. Kaararkaani wey fiicnaan karaan in la fiiriyo, laakiin fursadaha aad ku heli karto kaar ka sarreeya flop waa 52% oo keliya. Tani waxay u tarjumaysaa fursad badh ah oo ciyaarta lagaga badbaadi karo.
Ciyaaryahan turub ahaan, waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad fiiro gaar ah u yeelatid waxyaabaha miiska saaran.
Dhibaatooyinka ayaa kaa caawin kara inaad gaarto go’aanno xog-ogaal ah oo ku saabsan ficilladaada iyo go’aannada sharadka.
Fahamka kala duwanaanshaha miiska ayaa ku ridi doona boos fiican.